China CNC Pipe Threading Lathe fekitori uye vagadziri | Oturn
1.This CNC pombi tambo lathe ichangobva kugadzirwa.
2.Mubhedha unogadzirwa neyekutanga-nhatu-masvingo madziro mamiriro, uye kumashure madziro akarongedzwa ne12 ° yakatenuka. Hupamhi hwesitima yetrairi yemubhedha ndeye 550mm. Iyo yakanyanya-odhiyo yakadzimwa uye yakanyatsogadziriswa kuti ive nechokwadi chekurongeka uye hupenyu hwehupenyu hwemuchina.
3.Iyo yakakosha gearbox mhando chokurukisa unit, maviri-kumhanya inverter, isina tsoka mugiya; iyo huru mota ndeyeBeijing CTB chokurukisa servo mota, iyo isingangosangana chete nezvinodiwa neshoni yekupedzisa, asi zvakare inowana inoshanda yekucheka. Izvo zvakasiyana zvachose neCCC lathe iyo yakagadziridzwa pahwaro hwese lathes.
4.Kushandiswa kwekudzima chaiko kukuya magiya uye emhando yepamusoro mabheyari inova nechokwadi chekuti muchina ruzha rwakanaka.
5.Iyo yemusoro inotora yakasimba yekunze kutenderera kutonhodza lubrication system, iyo isingori chete inoderedza tembiricha kumuka kwe chokurukisa, asi zvakare zvinobudirira inochengeta iyo yemusoro yakachena uye yakazorwa.
6.I X uye Z matemo anotora yakakwira-chaiyo bhora sikuruu yakananga dhiraivha uye inotungamira sikuruu prestressed kusagadzikana chimiro. The Z-akabatana sikuruwa nzungu Hanger chinhu chinokosha vachikanda mamiriro. Iyo njanji yekutungamira yakasungirirwa neYT bhandi rakapfava. Hupamhi hwemubhedha wechigaro skateboard ndeye 300mm uye kureba kuri 550mm. Kazhinji, saizi yerudzi urwu yemuchina ndeye 280 uye 480mm, iyo inovandudza kutungamira kwakaringana uye kunyatso kweichi chishina chishandiso, uye zvinobudirira inovandudza hupenyu hwebasa remuchina.
7.Iyo huru yekutyaira yemuchina chishandiso inogadzirwa neSMTCL; iyo simbi yekuchengetedza simbi yakagadzirirwa zvakasununguka uye yakagadzirwa neyakajairika inotonhora-yakakungurutswa simbi simbi.
Max.kutendeuka hupamhi hwechigadziro chekushandisa
Dhayamita renji yepombi tambo
-Tatu-shaya Chinyorwa chuck Φ400
Nhatu-shaya Chinyorwa chuck Φ500
Four-shaya Chinyorwa chuck Φ800
Rutivi rwekumashure chuck
Chine-chinzvimbo chemagetsi chishandiso mubati
Muswe wemuswe mugomba
Kunze kwekupararira kutonhora
Voltage kuchinja-chinja renji
Pashure: Center Drive lathe Yekutsigira Roller
Zvadaro: Gantry Type CNC Drilling Uye Yekugaya Machine